Sei kuisa FSX musi Windows 8 / 8.1 / 10?
Kuisa FSX (shanduro dzose) musi Windows 8 / 8.1, tevedzera matanho aya:
1- dzishandise FSX anowanzoita chete maDVD.
2- Kana installation yapera, zvakarurama tinya «fsx.exe» (imi angazviziva pano: C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X). Pano, nokusanangura «kugarisana» Tab akamisa hwindo sezvinoratidzwa pazasi:
3- Download 32 nematomhu shanduro « UIAutomationCore », Unzip faira namatidza muna FSX inonyanyoshandiswa forodha (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_). It acharuramisa dambudziko dzaisatarisirwa kubonderana kwemotokari pamusoro FSX.
Zvino, pashure izvi zvishoma matanho, FSX vanofanira igadzikane musi Windows 8 / 8.1 uye 10